बिडेनले कसरी अध्यागमन कानूनहरू परिवर्तन गर्ने योजनाहरू गर्यो - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
मार्च 4, 2021 मार्च 3, 2021 लिजी होवार्ड ब्लग, विशेष समाचार
उसको लक्ष्य छ शरण कानूनलाई फेरि ठाउँमा राख्नु जुन अनुप्रयोगको संख्याको अनुगमन गर्दैन।
"Dreamers" DACA अन्तर्गत सुरक्षित थियो, तर यो हटाईएको थियो जब ट्रम्प अफिसमा थिए।
लक्ष्य भनेको संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेका अस्थायी कामदारहरूको लागि प्रोत्साहनको रूपमा भिसाको प्रयोग गर्नु हो ताकि उनीहरू थप काम पाउन सक्नेछन्।
२०२० संसारका धेरै परिवर्तनहरूको साथ धेरैका लागि लामो वर्ष थियो, जसमध्ये केही राम्रो र केही खराब थिए। एउटा परिवर्तन जुन जो नयाँ बिधिन भनेर चिनिने एक नयाँ राष्ट्रपतिको परिचयमा हुनुहुन्छ भनेर निर्भर गर्दै राम्रो हुन सक्थ्यो। बिडेनसँग आप्रवासीहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने हार्दिक हृदय छ, त्यसैले उनले आफ्नो समयभन्दा पहिले राखिएका थुप्रै अध्यागमन कानूनहरू परिवर्तन गर्ने उद्देश्य राखेका थिए। तपाईं केहि परिवर्तनहरू भएको देख्न सक्नुहुनेछ जुन तल देखा परेको सूचनामा देखा पर्नेछ।
१. ट्रम्प नीतिहरूमा परिवर्तन
राष्ट्रपति जो बिडेनले अध्यागमनमा परिवर्तन गर्न सुरु गरिसकेका पहिलो कदम भनेको ट्रम्पले राखेका थुप्रै नीतिहरू परिवर्तन गर्नु हो। उसको लक्ष्य छ शरण कानूनलाई फेरि ठाउँमा राख्नु जुन अनुप्रयोगको संख्या अनुगमन गर्दैन। उसले सुनिश्चित गर्नेछ कि प्रत्येक अनुप्रयोग निष्पक्ष र सुरक्षित ढ done्गले गरिएको छ, र एक दिनमा धेरै भन्दा धेरै अनुप्रयोगहरू गर्न सकिन्छ। उनले मध्यपूर्वका देशहरूबाट आएका शरणार्थी प्रतिबन्धहरूलाई हटाउन पनि सकेका छन जसले उनीहरूलाई अत्यन्त खाँचोमा परेका छन्।
२. आप्रवासन सुधार
जो बिडेन अझै पनी संयुक्त राज्य अमेरिकाको सिमानामा के भइरहेको छ सुधारको आशा गर्दै छन् जुन सुधारको भावनाको साथ आउँनेछ। उसको लक्ष्य भनेको नयाँ टेक्नोलोजीमा लगानी गर्नु हो जसले सीमामा रोक लगाउन मद्दत गर्दछ, यो ड्रग्ससँग सम्बन्धित छ वा मानव बेचबिखनमा। यसले खतराहरूबाट सीमा सुरक्षित गर्न मद्दत गर्दछ। यसले कानुनी ढ manner्गले सीमानामा पुग्न सहयोग खोज्नेहरूलाई रोक्न सक्दैन, तथापि, जो बिडेनका लागि कार्य गर्ने टोलीका अनुसार।
अध्यागमन एक धेरै जटिल कानूनी विषय हो जुन यस देशमा अवस्थित छ।
“. "सपना देख्ने" सुरक्षा
एक "सपना देख्ने" भनेको त्यस्तो व्यक्ति हो जुन Undocumented छ र जो एक बच्चाको रूपमा देशमा आएको छ र सधैं कानूनको समर्थन गर्दछ। यी तथाकथित "सपना देख्नेहरू" डिएसीए अन्तर्गत सुरक्षित थिए, तर यो हटाईएको थियो जब ट्रम्प कार्यालयमा थिए। यद्यपि यी व्यक्तिहरू कानून पालन गर्ने नागरिकहरू हुन् जसले संयुक्त राज्य अमेरिकामा शिक्षा नपाएको आप्रवासीको रूपमा शिक्षा पाएका थिए र जसले सैन्य सदस्यसमेत बनेका हुन सक्छन्। बिडेनको लक्ष्य DACA फेरि सुरु गर्नु र यी परिवारहरुलाई राज्यमा स्वतन्त्रता र आफ्नो नागरिकताको बाटोमा सहयोग पुर्‍याउनु हो।
Citiz. नागरिकताका साथ सहयोग
जो बिडेनसँग यी undocumented आप्रवासीहरूलाई सहयोग गर्ने इच्छा छ जसले देशको नागरिक बन्ने इच्छामा देशलाई सहयोग गर्दैछ। यी व्यक्तिहरूले अझै पनि आफ्नो पेचेकबाट करहरू लिएका थिए, र ती करहरू यी व्यक्तिहरू मात्र २$ अरब डलर बराबर थिए। बिडेन विश्वास गर्छन् कि उनीहरुसँग नागरिकताको अधिकार छ, र उनीहरुलाई कानुनी रुपमा यो कानुनी स्थिति प्राप्त गर्न सहयोग गर्न चाहान्छन्। यो स्पष्ट ब्याकग्राउन्ड चेक भएका व्यक्तिहरूको लागि मात्र आउँदछ, जसले सँधै कर फिर्ती बुझाउछ, र प्रणालीमा दर्ता नगर्नेहरूको लागि।
Vis. भिसा सुधार
अन्तिम परिवर्तन जो बिडेन अध्यागमन कानूनको सम्बन्धमा बनाउन लाग्दछ अस्थायी भिसा को आवश्यकता वरिपरि कानूनहरु लाई परिवर्तन गर्नु हो। लक्ष्य भनेको संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेका अस्थायी कामदारहरूको लागि प्रोत्साहनको रूपमा भिसाको प्रयोग गर्नु हो ताकि उनीहरू थप काम पाउन सक्नेछन्। यो महत्वपूर्ण छ कि त्यहाँ पर्याप्त कार्यान्वयन भइरहेको छ सुनिश्चित गर्नका लागि, यद्यपि यी व्यक्तिहरूले उचित ज्याला पाइरहेका छन् र भिसाको समयावधि सकिएको छैन। देशलाई सहयोग पुर्‍याउने यी कामदारहरूको लागि कति भिसा उपलब्ध छन् भनेर विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि हो।
अध्यागमन एक धेरै जटिल कानूनी विषय हो जुन यस देशमा अवस्थित छ। यस वरपरका नीतिहरू निरन्तर परिवर्तन भैरहेको छ जुन यस देशको वर्तमान समय र स्थानमा राष्ट्रपति को हो भन्नेमा निर्भर गर्दै। जो बिडेनले बनाएका धेरै नीतिहरू आप्रवासीहरूलाई कानुनी स्थिति प्राप्त गर्न र यस देशमा निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सहयोग पुर्‍याउन देखिन्छन्। यदि तपाईंलाई एक चाहिन्छ भने अध्यागमन कानून फर्म यसले तपाईंलाई यी परिवर्तनहरू बुझ्न र यसलाई तपाईंको जीवनमा लागू गर्न मद्दत गर्दछ, सकेसम्म छिटो सम्पर्कमा आउनुहोस्।
अमेरिका सांप्रदायिक समाचार आप्रवासन राजनीति
लिजी होवार्ड एक कोलोराडो निवासी हो जसले कोलोराडो विश्वविद्यालयबाट स्नातक पछि स्वतन्त्र लेखकको रूपमा आफ्नो समय खर्च गर्दछन्।